सबै नेता कार्यकर्ताको सहमति अनुसार अगाडि बढ्छु : पप्पु
पासाङ्ग ठकुल्ला बैशाख १३, २०७६
राजनीति गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैलाई अधिकार बराबरी छ । अधिकार सरह नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता सबैमा हुन्छ । अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको मन हुन्छ । तर पार्टीको अनुशासन अनुसार पनि चल्नु पर्छ । नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भैरहन्छ । समय अनुसार नेतृत्वमा परिवर्तन हुन पनि आवश्यक छ । म एक इमानदार मान्छे हुँ । सबै साथीहरुलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । जनताको सेवा गर्नेमा सबै नेताको भूमिका हुनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डान्स क्लास नलिएरै बेली डान्सर चैत्र ३०, २०७५
पर्यटन व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न सडक खाना महोत्सव चैत्र ३०, २०७५
'राजनैतिकसंगै प्रशासनिक स्थिरता आवश्यक' आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुबाट सकेसम्म धेरै लगानी जुटाउनुपर्‍यो । अहिले लगानी सम्मेलन भयो राम्रै भयो । तर सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लगानीकर्ताहरुसँग बसेर प्रस्ताव राख्दैमा लगानी आउने भन्ने होईन । यो त केवल प्रस्ताव मात्रै हुन् । यसको लागि त देशको अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । त्यसै लगानीको आश गरेर हुन्छ ? चैत्र २२, २०७५
'लगानीकर्ताले अब कुनै झन्झट बेहोर्नुपर्दैन' चैत्र १५, २०७५
लगानी सम्मेलनले मुलुकमा लगानीकाे वातावरण बन्छ यो बजारमा यसलाई सोच्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसको लागी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता धेरै कोषहरु छन्, यीनीहरुलाई मार्केट मेकरको रुपमा भित्र्याउनुपर्यो । चीन, बंगलादेशमा के देख्न सकिन्छ भने, बजार खस्कियो भने सरकारले नीति लिएर काम गरेको हुन्छ । चैत्र १५, २०७५
लगानी सम्मेलन र विप्लव आन्दोलनः विदेशीहरुले नेपालमा गर्लान् त लगानी ? चैत्र १४, २०७५
प्राविधिक जनशक्तिलाई बाइपास गरेर समृद्धि आउँदैन चैत्र ११, २०७५
बीमा कम्पनीहरुमा ‘बिग मर्ज’ अत्यावश्यक चैत्र ७, २०७५
‘सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्न नीति नियम आवश्यक छ’ चैत्र ४, २०७५
जनतालाई बैंकिङमा जोड्ने माध्यम नै हामी हौं फाल्गुन ३०, २०७५
प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी गायिका सरु भन्छिन्ः सामाजिक सञ्जालविना बर्बाद हुन्छु कतिपयले आफ्नो गीतमा अरुलाई पैसा दिनुभन्दा आफै गर्दा चर्चित पनि हुने र पैसा पनि जोगिने कारणले यस्तो गरेको हुनसक्छ । कोही कोहीले गायन र मोडलिङमा दुबैमा राम्रै गरेका पनि छन् जस्तो की रामकृष्ण ढकाल, प्रमोद खरेल हेमन्त शर्मा । फाल्गुन २८, २०७५
'निगमको संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ' फाल्गुन २५, २०७५
'आकर्षक आयोजनाहरुमा मात्र जनताको लगानी पर्छ' सरकारले अबको दश वर्षलाई उर्जा दशकको रुपमा घोषणा समेत गरेको छ । त्यसको कार्यन्वयन स्वरुप अहिले त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाले जनताको शेयर पाईसकेको छ र निर्माणको प्रक्रियामा पनि गईसकेको छ । फाल्गुन १७, २०७५
‘असारे विकासले मुलुकको विकासमा घाटा पुगेको छ’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको प्रतिबद्धताको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने काम जुन स्केलमा हुनुपर्ने हो त्यो स्केलमा आमजनताले देखिराखेका छैनन् । भित्रभित्रै आधार तयार त भइरहेको होला । फाल्गुन १५, २०७५
भविष्यमा ठूलो पर्दामा खेल्ने सोच छ : सुदिपजंग खासमा म अविवाहित भएकोले व्यक्तिगत रुपमा मलाई पुगिरहेको छ तर यसैको कमाईबाट परिवारलाई भने आर्थिक सहयोग गर्न सकेकोचाही छैन् । यसैक्षेत्रमा लागेर पनि जीवननिर्वाह गर्न सकिन्छ तर विलासिताका बस्तु खरिद गर्ने लक्जरी लाईफ विताउँने सोच भएकालाई अलि गाह्रो भने हुन्छ । नभए धेरैले यसैक्षेत्रमा लागेर नाम र दाम दुबै कमाएका छन् । फाल्गुन १३, २०७५
फुर्सदमा विहे गर्ने सोच बनाएकी अंकिता, जसको स्वरले देशविदेशकै स्टेज तताउँछ रोल्पा बुढागाउँमा जन्मिएकी गायीका अंकिता मगर छोटो समयमा नै देश तथा विदेशमा परिचय जमाउन सफल भएकी छिन् । माघ २९, २०७५
विकासका लागि स्रोत पर्याप्त छैनः अर्थमन्त्री खतिवडा
शेर्पासँग मछिन्द्रको अप्रत्यासित हार